पहिले पानीकै कारण छोरी दिन हिच्किचाउँथे, अहिले घर अगाडि नै छ धारा :: Setopati
पहिले पानीकै कारण छोरी दिन हिच्किचाउँथे, अहिले घर अगाडि नै छ धारा
भगवती पाण्डे बुटवल, फागुन ३
प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं. ७ रानीटारकी ६६ वर्षीया भूमा विकले आफ्नो ५० वर्ष उमेर खोलाबाटै गाग्रीमा खानेपानी बोकेर बिताइन्। वि.सं २०२२ सालमा विवाह गरेर रानीटार आइन्। १५ वर्षको उमेरमा भित्रिएकी भूमालाई पानी बोक्दा डोकोले पारेका डाम अझै पनि पिँठ्यूमा बसेजस्तो लाग्छ।
एक गाग्री पानी लिन जाँदा र आउँदा दुई घण्टा लगाउनुपर्ने आफ्ना दुःख सम्झिँदै भूमा भन्छिन् –‘हाम्रो पालामा पानीका लागि धेरै दुःख गरियो तर अहिलेका बुहारीहरूका लागि भने सजिलो भएको छ, तर पनि हामी खुसी छौं बुहारीलाई पानी बोक्न नपरेपछि घरको काम गर्न पाएका छन्।’
स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं ७ रानीटार र तापमा एक समय बिहे गरेर बुहारी ल्याउन गाह्रो हुन्थ्यो। खानेपानीको चरम समस्या भएकै कारण छिमेकी गाउँले आफ्नो छोरी चेलीलाई रानीटार र तापमा विवाह गरिदिन हिच्किचाउँथे।
तर अहिले समय फेरिएको छ। पहिले दुई घण्टा लगाएर ठाडोखोला र अँधेरी खोलाबाट एक गाग्री पानी ल्याउनेहरू घरकै ढोकामा पुगेको धाराबाट पानी पिउन थालेका छन्।
यमी अधिकारी गाउँमा खानेपानीको आयोजना पुगेपछि आफ्नो गाउँ अरु गाउँभन्दा केहीमा कमी नभएको बताउँछिन्। ‘
पहिले पानीकै कारण छोरी दिन हिच्किचाउँथे, पानी नभएको गाउँमा कहाँ छोरी दिने भन्थे, अहिले त घरघरमै पानीको धारा आएको छ हामी केहीमा कमी छैनौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
६० वर्षीय पद्यमा कुमारी अधिकारी गाउँको ठाडोखोला र अँधेरी खोलामा गाग्री बोकेर दिनमा ६/७ पटक पुग्ने गर्थिन्। दुई घण्टा लगाएर ल्याएको एक गाग्री पानी उतिखेरै सकिथ्यो।
एक जनाको काम दिनभरि खोलाबाट पानी बोक्न नै ठीक्क हुन्थ्यो। विगतका भोगेको दुःख सम्झिए पनि अहिले घरको ढोकामै धारा जोडिएपछि भने उनी दंग छिन्।
पहिलो चरणमा गत फागुनदेखि स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको वडा नं. ६ स्थित दंगल खोलाबाट ल्याएको पानीले १ सय ५० घरमा एक घर एक धारा जडान गरिएको थियो।
दोस्रो चरणमा बेलबास लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत माडी खोलाबाट पानी ल्याई १ सय १५ घरमा धारा जडान गरी पानी वितरण भइसकेको छ।
दुइटा स्कीम अन्तर्गत कुल ६ सय ७७ घरधुरीलाई लाभान्वित पार्ने योजना रहेकोमा बाँकी ४ सय घरका लागि धारा जडान गर्ने काम भइरहेको खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर आवेद हुसेनले बताए।
२ करोड ४९ लाख ३० हजार ६ सय २४ रुपैयाँ लागतको दोस्रो आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी वडाका सबै घरमा एक घर एक धारा जडान गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
लागतको २० प्रतिशत सहभागिता भने उपभोक्ता समितिले श्रमदानबाट पूरा गर्ने गरेका छन्। धारा जडानको लागि उपभोक्ता समितिले खन्ने पुर्ने काममा श्रमदान गरेका छन्।
माइतीमा पानीको असुविधा नभोगेकी शुशिला अधिकारीलाई विवाह गरेपछिका केही वर्ष असजिलो लाग्यो। घरमा खानेपानीको धारा नभएपछि खानेपानी र नुहाउने धुने काम पनि खोलाकै पानीबाट गर्नुपर्थ्यो।।
‘ठाडो खोलाबाट पानि ल्याई एउटा टोलमा एउटा धारा जोडिएको थियो। सिँचाइको लागि समेत प्रयोग गरिएको खोलाबाट ल्याएको त्यही धारा पनि चैत वैशाखमा सुक्थ्यो,’ उनी विगत सम्झिँदै भन्छिन्।
टाढाको खोलाबाट पानी ल्याउन खर्च हुने अहिले गाउँलेले घरको अरु काममा लगाउन थालेका छन्।
पानीको सुविधा पुगेपछि महिला र बालबालिकाको समय बचत भएको छ।
वडा नं ७ का अध्यक्ष पदम भट्टराई प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्वर्गद्वारीका साविकको ५ वडामध्ये वडा नं. ५, ६, ७ र ८ वडालाई माडी खोलाबाट लिफ्टिङ गरी लगिएको खानेपानी वितरण गरिरहेको बताउँछन्।
साविकको वडा नं ९ ले भने ठाडो खोलाबाट ल्याएको पानीले चलाउँदै आएका छन्। त्यहाँका बासिन्दालाई पनि नगरपालिका र वडा कार्यालयको बजेटबाट भए पनि एक घर एक धारा वितरण गर्ने योजना रहेको बताए।
माडी खोलामा बनाइएको ८ मिटर गहिरो इनारबाट पानी निकालिएर वितरण गरिए पनि परीक्षण भने गरिएको छैन। वडा अध्यक्ष भट्टराई ८ मिटर गहिरो इनारबाट पानी निकालिएको कारण अशुद्ध नभएको दाबी गर्छन्।
खोलाबाट लिफ्टिङ गरी प्रतिसेकेन्ड ६ दशमलव ६ लिटर पानी १३ सय मिटरमाथि निर्माण गरिएको ट्यांकीमा पुर्‍याइएको छ। १४/१४ घनमिटरका दुइटा ट्याङ्कीबाट उपभोक्ताका घरघरमा धारामा पानी पठाइएको छ।
खोलाबाट नि:शुल्क रूपमा पानी उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ता शुल्क तिर्नुपरे पनि घरको ढोकामै धारा पुगेपछि खुसी छन्। स्थानीय डामी अधिकारीले पैसा तिर्नु परे पनि दुःख हटेर गएको भन्दै पनि खुसी व्यक्त गरिन्।
सानैमा बिहे गरेर आएपछि जीवन नै पानी बोकेर बिताएको बताउने डामीले पानीको लागि महिनाको दुई तीन सय रुपैयाँ बुझाउनु परे पनि कुनै दुःख नलागेको बताइन्।
खानेपानी आयोजनाले आयोजनालाई दिगो बनाउन न्यूनतम आठ हजार लिटरलाई न्यूनतम मानेर कम्तीमा एक सयदेखि एक सय ५० रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यसको अलावा उपभोक्ताले खपत गरेको अनुपातका आधारमा प्रति युनिट (एकहजार लिटर) २० देखि २५ रुपैयासम्म महशुल शुल्क राखिएको छ।
इञ्जिनियर हुसेनले यही आर्थिक वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए। आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटको कुनै समस्या नभए पनि पानीको महशुल उठाउन नसके सञ्चालनमा समस्या आउन सक्नेतर्फ भने उपभोक्तालाई सचेत बनाइएको उनले बताए।
त्यस्तै वडा नं. ७ का रानीटार र तापमा प्रदेश सरकारले लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना संचालन गरिरहे पनि नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा पनि व्यक्ति आफैंले लगानी गरेर एक घर एक धारा जडान गरेका छन्।
इञ्जिनियर हुसेनले नगरपालिकाका अरु वडामा पनि लिफ्टिङमार्फत् र सतहबाटै पनि खानेपानी योजना संचालन भइरहेको बताए। वडा नंं ३ मा दुइटा आयोजना प्रदेशको योजना अन्तरर्गत सुचारु भइरहेका छन्।
वडा नं. ५ मा भने संघ अन्तर्गत लिफ्टिङमार्फत् दुइटा र एउटा सतही आयोजना संचालन भइरहेकोमा प्रदेश सरकारले एउटा लिफ्टिङ आयोजना संचालन सुरू गरिरहेको छ।
कृषि उत्पादनका हिसाबले पनि उर्वर क्षेत्र रहेको रानीटार तापमा सिँचाइका लागि पनि माडी खोलाबाट लिफ्टिङ गरी पानी लगिएको छ।